“Raharaha Ambohimahamasina” : miandry ny fitsarana ny Bianco | NewsMada
“Raharaha Ambohimahamasina” : miandry ny fitsarana ny Bianco
Manaraka ny voalazan’ny paikady ny antontan-taratasy momba an’Ambohimahasina. Rehefa nahavita famotorana ny Bianco, nisy olona notanana vonjimaika. Tapitra ny fe-potoana ahazoana mitana ilay ben’ny Tanàna, tsy maintsy naterina eny amin’ny fitsarana, araka ny voasoratra amin’ny fe-potoana voalazan’ny lalàna.
Izay ny fanazavan’ny tale jeneralin’ny Bianco, Andriamifidy Jean-Louis, teny Soarano, omaly, momba ny tohin’ny “Raharaha Ambohimahamasina”. “Anjaran’ny fitsarana indray no maniraka anay hanao ny famotorana izay tsy vita tao amin’ilay raharaha”, hoy izy. Efa any amin’ny fitsarana iny antontan-taratasy iny, miandry ny iraka avy aminy ny Bianco amin’izay olona tsy mbola heno ka tokony hohenoina.
Rehefa mahazo an’izay iraka izay ny Bianco, afa-manohy ny raharaha. Tsy afa-manohy intsony izy, fa efa eny amin’ny fitsarana ny antontan-taratasy. Mila andrasana izay fanomezam-pahefana avy amin’ny fitsarana izay. “Tsy maintsy miandry an’izay isika hahazoana manohy azy”, hoy ihany izy.
Nampihemotra ny ady amin’ny kolikoly ny tsy fampiharan-dalàna
“Aza hadinoina fa tamin’iny taona 2016 iny, niezaka nametraka ireo lalàna fototra hahafahana mampihatra ny paikadim-pirenena iadiana amin’ny kolikoly isika”, hoy izy momba ny isa sy ny laharan’i Madagasikara izay nihemotra araka ny tatitry ny Transparency International, taona 2016, momba ny kolikoly.
Atomboka ampiharina amin’ity taona 2017 ity ny lalàna vao nolaniana tamin’ny 2016. Tsy mahagaga raha tsy hita loatra ny fiantraikan’izay tao anatin’io fe-potoana io. Karazana fakana bahana ny famatrehana ireo rafitra sy lalàna mba hahazoana vokatra tsara, araka ny fanazavany.
Aoka isika tsy ho kivy amin’ireny isa sy laharana ireny, fa zavatra mety mitranga ireny, raha ny fijeriny ny tatitry ny Transparency International. “Ny tena zava-dehibe: ny finiavantsika handroso”, hoy izy. Tokony hifantohana izay hatao mandritra ity taona 2017 ity, fa be ny asa miandry hanatsarana ny ady amin’ny kolikoly.
Amin’izany rehetra izany: tsy mbola fitaovana politikan’ny fitondrana ihany ve ny fitsarana, na amin’ny ady amin’ny kolikoly aza?